Lwesihlanu 7 Meyi 2021
Ukufakwa Kwe-Magnesium Imisebenzi ye-Arome Agency ku-graphic identity kanye ne-artistic yokufaka ka-Kailani isuselwa ekubumbeni okuncane nokuhlanzekile. Le minimalism ihambisana nomkhiqizo onomqobelo owodwa kuphela, i-magnesium. Ukuthayipha okukhethiwe kuqinile futhi kuyabhalwa. Kubonakala njengamandla we-mineral magnesium namandla womkhiqizo, obuyisela ubungqabavu namandla kubathengi.
Lwesine 6 Meyi 2021
Ibhodlela Lewayini Isithako sakha ubunikazi besithombe somqoqisi uGabriel Meffre ogubha iminyaka engama-80. Sisebenze ekwakhiweni kobuntu kwama-30s angaleso sikhathi, okufanekiselwa ngokugqamile ngowesifazane ophethe ingilazi ye wayini. Amapuleti anemibala asetshenzisiwe anezinsika zokufakelwa kwekhanda nokushisa okune-foil okushisayo ukuze kufakelwe uhlangothi lweqoqo.
Lwesithathu 5 Meyi 2021
Ukufakwa Kokudla Inselelo yokutholwa kokupakishwa kwe-chip yohlobo lwe-BCBG ibandakanya ukufeza uchungechunge lokupakwa ngokwanele kanye nomhlaba wophawu. Ukupakishwa kwakumelwe kube okwokubumbili futhi kube okwesimanje, ngenkathi kunalokhu kuthinta lobuciko futhi uhlangothi oluhle noluzwelayo oluletha izinhlamvu zidwetshwe ngopende. I-aperitif yisikhathi esikholekisayo okufanele sizizwe ekugcwalisweni.
Lwesibili 4 Meyi 2021
Msombuluko 3 Meyi 2021
Izitebhisi Izitebhisi zemvelo ze-UVine zakhiwa ngokuxhumanisa amaphrofayili webhokisi le-U ne-V ngendlela yebhokisi. Ngale ndlela, izitebhisi ziba nokuzisekela ngoba azidingi sisekelo sesikhungo noma ozungezile. Ngesakhiwo sakhona futhi siguquguqukayo, ukwakhiwa kuletha ukwelula lapho kukhiqizwa, kufakwa, kuthutha nokufakwa.
Sonto 2 Meyi 2021
Igumbi Lokukhiya I-Sopron Basket iyiqembu labesifazane be-basketball labasebenza eSopron, eHungary. Njengoba bengelinye lamaqembu aphumelela kakhulu amaHungary anezindebe zokulwa nobunjiniyela bezwe lonke abangu-12 futhi bazuza indawo yesibili kwi-Euro, abaphathi beklabhu banquma ukubeka imali enkulukazi eyindawo yokukhiya eyindawo enhle yokugcina igama le kilabhu, evumelana nezidingo zomdlali okungcono, zibashukumise futhi bakhuthaze ubunye babo.
Ukufakwa Kwe-Magnesium Ibhodlela Lewayini Ukufakwa Kokudla Izitebhisi Izitebhisi Igumbi Lokukhiya